Ahoana ny ihaonan’ny fanatontoloana, ny mari-panondroana ary ny kolontsaina ao amin’ny zava-kanto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marie André
Voadika ny 02 Septambra 2019 10:05 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Italiano, polski, Français, Português, Español, Esperanto , Ελληνικά, English
Ireo no fanontanian'i Omid Memarian, mpanao gazety mandala zava-kanto, miara-mandinika amin'ireo mpanakanto fanta-daza iraisam-pirenena mitady ny foto-piaviany any Iran, Shina sy any an-kafa
“Ny olona no lohahevitra lehibe indrindra amin'ny sariko. Miharihary ho ahy noho izany ny fitiavako handeha any amin'ny toerana ananan'ny olona fahalalahana bebe kokoa amin'ny akanjony, ny fitafiny ary ny fitondrantenany ara-piarahamonina, ” hoy i Kourosh tamin'i Omid tamin'ny tafatafa nandritra ny fihaonana tao amin'ny “studio” iray tany Manhathan
Mpanao maritrano Iraniana-Amerikana iray lasa mpanaingo namoaka ny cityzen by Azin, marika lamaody sy kojakoja sarobidy nanomboka tamin'ny taona 2012 i Azin Valy. Tamin'ny desambra 2016, nanaiky hiresaka ny filozofiany sy ny tanjony amin'ny tetikasany izy.
Manavatsava ny fifamatorana mavitrika misy eo amin'ny kolontsaina roa izay mandrafitra ny mari-panondroany Ilay mpanakanto britanika teraka Iraniana Jason Noushin. Nandao an'i Irana i Jason Nourshin tamin'izy 13 taona, saingy nanohy nameno ny fiainany ny kolontsaina persiana, ary ao amin'ny sangan'asany, ampamirapiratan'ny firobohany ao anatin'ny kolontsaina tandrefana ny maha persiana azy.
Nanazava tamin'i Omid i Noushin tamin'ny Janoary 2018
Manao izany amin'ny fandokoana gazety sy boky izy, manazava ny fomba fijeriny amin'i Omid tamin'ny Aprily 2018: